Ukuthengiswa kokhuseleko olusezantsi kweYuro okuyingozi kakhulu | Ezezimali
Ukuthengiswa kokhuseleko olusezantsi kwe-Euro okuyingozi kakhulu
Ekuqaleni, kufuneka ulumke kwisitokhwe esithengisa ngaphantsi kweyuro enye. Phakathi kwezinye izizathu kuba nje ukuba le meko ifikelelwe Kunzima kakhulu ukuya esidlangalaleni ngaphezulu kwe-euro. Oku kuhlala kuqhelekile kuwo onke amaxabiso agxile kule meko. Okwangoku, zininzi iinkampani ezidwelisiweyo ezinokuba yingozi kakhulu ekuvuleni izikhundla ukusukela ngoku. Kwaye ukuze ungangeni kulempazamo, siza kuchaza ukuba ziyintoni na kwaye zeziphi iimpembelelo onokuzibona untywiliselwe kuzo.
Kule meko ngokubanzi, kuthotho lwamaxabiso ahlala egcina inkalo yezobugcisa ekhathaza kakhulu njengabamkeli kwimisebenzi yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ingakumbi ngenxa yeengxaki zayo ukuze kwixesha elifutshane neliphakathi babuyele ukuba bacatshulwe ngaphezulu kweyunithi ye-euro. Yeyiphi eyona njongo yakho iphambili kwezi nyanga zimbalwa zizayo.
Olu luhlu lubandakanya amaxabiso afanelekileyo zidweliswe kwi-Ibex 35, njengamaqela athile ezemali kwezinye izinto eziqikelelweyo. Akukho sithintelo ukuba amaxabiso abo asezantsi kwaye kunokwenzeka ukuba izinto zibe mandundu kwiiseshoni ezilandelayo kwiimarike zezabelo. Olona loyiko luphambili kubasebenzisi besitokhwe.
1 Ukuwa kweBanco Sabadell
2 I-Sniace phantsi komoya ophelayo
3 Amper: ngaphandle kweziphumo zayo
4 IDeoleo enomngcipheko opheleleyo
5 USUKU kwiindleko nge-OPA yakho
Ukuwa kweBanco Sabadell
I-Banco Sabadell lolunye ukhuseleko olukule meko ibuthathaka xa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo izabelo zalo bezithengisa kumanqanaba asondele kakhulu kwii-euro ezimbini. Kwimeko ekhumbuza kakhulu okwenzekileyo kutshanje nge Popular. Ngaphezulu kwesizathu esaneleyo sokungabikho kwexabiso kuzo zonke iimeko. Ayothusi into yokuba ubuchwephesha bayo bumema ukuba buqhubeke nokuhla kwiinyanga ezizayo. Ujongene nemeko embi eboniswe licandelo lebhanki ngokubanzi.
Kwaye imisebenzi ayijoliswanga nexesha elifutshane iyacetyiswa kuba ngekhe kumangalise ukuba abatyali mali abancinci nabaphakathi bangahlala ikhonkxiwe kwixabiso ixesha elide. Kulindeleke ukuba amaxabiso abo asondele ukuya kwisiqingatha seyunithi ye-euro. Ngayiphi na imeko, eyona nto inzima ngakumbi kukuba inokuwoyisa umlo obalulekileyo abanawo kwi-euro efanelekileyo.
I-Sniace phantsi komoya ophelayo
Elinye lamaxabiso entengiso eqhubekayo kuzwelonke enomngcipheko omkhulu kwaye kwiiseshoni zokurhweba zakutshanje zibonakaliswe kukungazinzi okuphezulu. Malunga nee-euro ezingama-0,10 kwisabelo ngasinye, esibonisa ubuqhetseba obukhulu besikhundla saso kwiimarike zezabelo. Apho olunye uloyiko kwicala labatyali mali kukuba inkampani inokunyamalala nangaliphi na ixesha ngenxa yokusebenza okuncinci kwendlela yayo yeshishini. Into eyenzekayo kukuba kula maxabiso apho ixabiso lidweliswe khona, zincinci kakhulu iimpembelelo eziyakuba nazo kwingxelo yengeniso yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Elinye lamaxabiso amaxabiso eSpain ekufuneka ephume ngoku. Kuncinci kakhulu ukuba kungafunyanwa kwizikhundla zakho kwaye ke akufanelekile ukubeka umngcipheko kwimali oyifumanayo ngale ndlela. Kuba ekupheleni kosuku sijamelene nenye yeenkampani ngexabiso elincinci Iparquet yonke yaseMadrid kwaye le yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo ukusukela ngoku.
Amper: ngaphandle kweziphumo zayo
Iqela le-Amper lifumana i-48,1 yezigidi ze-euro kwi-2018 emva kwempumelelo kwintengiso yawo onke amashishini ayo eMzantsi Pacific, kwaye iphinda-phinde isiphumo sayo somnatha ngokuqhubeka kokusebenza amaxesha angama-19 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Inkqubo ye- Iziphumo ezihlanganisiweyo Ukuqhubeka kokusebenza, ngaphandle kwesiphumo senzuzo eyinkunzi enxulunyaniswa nentengiso yamashishini ase Mzantsi Pacific, ifikelela kwizigidi ezili-12 zeerandi, ezimele ukuthotyelwa kwe-111,8% yebhajethi ka-2018, kunye nokuphuculwa kwamaxesha ali-19 xa kuthelekiswa neziphumo zonyaka ongaphambili.
Ngokwenxalenye yayo, i-EBITDA idlula i-15,6 yezigidi ze-euro, iphinda-phinda ama-4 amanani afikelelweyo ekupheleni konyaka odlulileyo, kwaye idlula uhlahlo-lwabiwo mali lwe-12,4 nge-2018%. ukuhlanganisa indlela yokukhula ebekwe kwisiCwangciso soBuchule
IDeoleo enomngcipheko opheleleyo
Elinye lawona maxabiso mabi kwimarike eqhubekayo yile imelwe yile nkampani inikezelwe kwintengiso yeoyile edwelisiweyo ngezantsi kwe-0,10 euro. Ngomngcipheko wokwenene wokuba ngamanye amaxesha uza kuyeka ukudweliswa kwiimarike ze-equity kwaye ungaphulukana nayo yonke imali egcinwe kwizabelo zayo. Akufuneki babekhona kuyo nayiphi na ipotifoliyo yotyalo-mali kwaye bangaze benze imisebenzi yokuqikelela kuba kuninzi ongaphulukana nako kunenzuzo. Ungakulibali ukuba awufuni kuba nesimanga esibi ukusukela ngoku. Sele kunzima kakhulu ukuphuma kula manqanaba asezantsi ngoku akhoyo ngoku.
USUKU kwiindleko nge-OPA yakho
Imbali yetyathanga lokutya libali elingenasiphelo kwaye lelinye lamaxabiso apho ungafanele kuthengwa naphantsi kwazo naziphi na iimeko. Nangona yonke into izakuxhomekeka ekubeni banokuphakamisa na Ixabiso lesicelo sokuthatha, nangona yonke into ibonakala ibonisa ukuba ayizukuba ngale ndlela kwaye ingozi inokuba nkulu kwiiseshoni ezilandelayo. Ngaphandle kokugweba ukuba banokuhlisa amaxabiso ezabelo zabo. Okanye nangokhetho lokushiya iimarike ze-equity. Isizathu esongezelelweyo sokungangeni kwizikhundla zenye yezona ndawo zishushu kwimarike yaseSpain. Kuncinci okunokwenziwa ngokuvulwa kwezikhundla ukusukela ngoku. Sele kunzima kakhulu ukuphuma kula manqanaba asezantsi ngoku akhoyo ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukuthengiswa kokhuseleko olusezantsi kwe-Euro okuyingozi kakhulu
Ujikeleza njani izikhundla kwiphothifoliyo yotyalo-mali?
Amaxabiso ama-4 awonyusa amandla akho okukhula